Ny “Alice Any An-tanin’ny Fahagagana” Araka Ny isainan’ilay Libaney-Frantsay Mpitsoka Trompetra Azy Rehefa Atao Gadona Hip-Hop Opera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2015 16:39 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, عربي, Français, русский, English
Ny 24 Aogositra 2015, nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ity lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjampeo nataon'i Betto Arcos ho an'nyThe World ity, ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Araka izany, rehefa nomena vintana i Maalouf ho afaka mandrafitra/mamorona sombiny ho atao mandritry ny Festival d'ile de France taona 2011, nanapaka hevitra izy ny hamerina haka sary an-tsaina ny Alice.
Manasongadina ny tarika mpiangaly jazz Maalouf, andiam-pitendry zavamaneno klasika, ary antoko mpihiran'ankizy ny fandraketana an-tsary ny “Any amin'ny Tanin'i Alice”. Manaraka ny fitsipika mitovy amin'ny ao anatin'ilay tantara “Alice any an-tànin'ny Fahagagàna” ahitàna ireo mpisehatra mitovy ihany. Saingy ny tontolon'ny nofinofin'i Carroll dia navaozina hifanaraka amin'ny vaninandro maoderina ao Frantsa tamin'ny alàalan'ny tononkiran'ilay Oxmo Puccino, artista Maliana-Frantsay mpiangaly hip-hop.
Farany indrindra, lazain'i Maalouf fa niriany ny hampiasa ny tantara “Alice any an-tànin'ny Fahagagàna” mba hametrahana teboka momba ny zonao hilaza ny hevitrao manokana. Ary ao anatin'ny tontolo iray taorian'ny vono olona tao amin'ny Charlie Hebdo, dia zava-dehibe tokoa izany, hoy izy.